Luminescent adka adag guddiga & filim saarayaasha filimka - China Luminescent adkaato guddiga & Filim Soosaarayaasha & Warshadaha
Taxane dheer kadib iftiinka dheer
Taxane faraxsan oo xiiso leh
Taxanaha Biyaha-Joogtada ah
Dufcaddii saytufta sare ee photoluminescent
Dambiilaha caagga ah
Diiriye dhalaalaya & jug
Resin jaantus isdabajoog ah
Guddi adag oo jilicsan iyo filim
Nidaamka baxsiga degdegga ah ee lumines
Photoluminescent jadee & shaqooyinka farshaxanka
Jumcaha yar yar & Dharka
Taxanaha dheer kadib iftiiminta dhaadheer
Alaabada la soo bandhigay
Dabaqyada dabaqyada ...
Luminescent Jade Iyo Lumine ...
Sawir dhalaalaya oo dheer kadib ...
Koofiyadaha Luminescent Luminous ...
Photoluminescent Vinyl Tape / Filim
Filimka 'photoluminescent' / cajaladdu waxay leeyihiin saameyn aad u wanaagsan oo ku kaydinta wax kastoo muuqda iyo iftiimaya. Kadib markay nuugaan iftiinka muuqda 10 ilaa 30 daqiiqo, waxay ku dhex nuuri karaan gudcurka mugdi 10 saacadood ugu yaraan. Waana lagu soo celin karaa wakhti kasta oo kaydinta iyo socodka dhalaalaya. Iyagu waxay leeyihiin waxqabadka wanaagsan ee cimilada waarta oo aan sun lahayn iyo wax aan dhib lahayn oo aan lahayn shucaac. Filimka luminescent-ka oo leh isku-dhejinta ayaa loo istcimaali karaa dusha sare qalab kala duwan ama maqaal, kaas oo isticmaalku la mid yahay kan looxyada adag, xitaa inbadan ayaa ka sii fudud. Sida waxaa loo gooyn karaa noocyo badan oo qaabab ama astaamo ah waxaana lagu dhejin karaa meesha aad ugu baahan tahay.
Ku iftiimin Filimkii Madoobaaday
Filimka Photoluminescent PVC Naqshad jilicsan ee filimka mugdiga ah, filimka dhalaalaya, Filinka Luminescent PVC filimka loo yaqaan 'photoluminescent PVC' waa badeecad luminescent ah oo lagu saleynayo midabka loo yaqaan 'photoluminescent paint', Waa filim foorno ah oo ka samaysan caag jilicsan, oo lagu taageeray warqad dhejis ah, oo aan lahayn waxyeello iyo waxyeelo lahayn. Malaha wax walxo shucaac ah waxaana lagu gartaa nuugista iftiinka degdega ah. Xaashiyaha daabacaadda daabacaadda silk iyo daabacaadda Ink-jet ...
Ku kululee waraaqda madow ee Vinyl
Vinyl Is-ku-adkeynta vinyl-ka-gaarka ah waxay leedahay guryo aad u xoog badan oo nal leh waxaana lagu taageeray astaamo xoog leh oo cimri dherer leh. Waxaa lagu heli karaa 1m x 50m oo duub ama in la jaro si loo buuxiyo shuruudaha macaamiisha. Duubitaannadu waxay ku yaalliin warqad warqadaysan oo kuxiran kartoonno xoog leh oo loogu talagay gaadiid badbaado leh iyo kaydinta. Sharraxaadda: Vinyl is-isku-dheellitiran oo jilicsan oo leh guryaha nalka leh. C ...
2020 filim cusub oo Photoluminescent ah
Filimka 'photoluminescent' waa badeecad luminescent soo saarta iyadoo loo saleynayo midabka loo yaqaan 'photoluminescent paint', Waa filim photoluminescent ah oo laga sameeyay caag jilicsan, oo lagu taageeray warqad dhejis ah, oo aan la adeegsan karin oo aan dhib lahayn. Malaha wax walxo shucaac ah waxaana lagu gartaa nuugista iftiinka degdega ah.
Gudida adke ee PVCumuminescent PVC
Photoluminescent PVC xaashi adag wuxuu dhalaalayaa badeecada mugdiga ah ee la soo saaray iyadoo lagu saleynayo midab mudada dheer leh ee foflasoosiyada, Waa guddi ciriiri ah oo ka samaysan caag adag. Xaashidan adag ee loo yaqaan 'photoluminescent PVC' xaashi adag ayaa la soo saaray iyadoo lagu qasay budada photoluminescent-ka dhowr qaybood oo PVC ah iyadoo la raacayo hanaan gaar ah.
Gudiyada adke ee PVCumuminescent PVC
Hubinta macluumaadka farsamada waxaa lagu fuliyaa iyada oo lagu saleynayo heerarka ku habboon ee la soo sheegay.
Daabacaadda silk-screen & inkjet daabacaadda, ku habboon xalka kaydiyaasha. Codsiga calaamadaha amniga 、 Calaamadaha digniinta signs Calaamadaha dabka-dabka iwm si ballaadhan ayaan u diyaarin karnaa isku-filitaanka guddiga iyadoo lagu saleynayo shuruudaha macaamiisha.
Xuquuqda daabacaadda - 2010-2020: Dhammaan Xuquuqda Aad ayaa Leedahay.